TTSweet: မှိုကန်ဇွန်း အစပ်ကြော် ...
Posted by T T Sweet at 3:42 PM
ညယံ September 22, 2010 at 4:42 PM
မှိုကန်စွန်း အစပ်ကြော် ကြည့်ပြီး ဗိုက်တောင် ပြန်စာလာပြီ။
ဖိုးတုတ် September 22, 2010 at 5:09 PM
" မှိုကန်ဇွန်း အစပ်ကြော် အိအိ၊ချိုချိုစပ်စပ်လေး
စားကြပါဦးရှင် " ဆိုပြီး ပုံကြီးပြပြီး စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးကို နှိပ်စက်တာလားဗျာ ...
အလုပ်မအားသေးတာနဲ. မချက်နိုင်သေးဖူးဗျို. ၊ အလုပ်အားမှပဲ ချက်ကြည့်ရမှာပဲ ၊
မြူးမြူး September 22, 2010 at 5:32 PM
မှိုများများ ကန်းစွန်းရွက်နည်းနည်းနဲ့ စားကောင်းမယ့်ပုံလေး.. ဒါနဲ့ မမဆွိက ဂျူရောင်းမှာနေတာလား.. ညီမတို့လဲ ဂျူရောင်းမှာနေတာပဲ..(မသိမသာ စကားခေါ်သွားသည်..) :) :P
Vista September 22, 2010 at 5:46 PM
ပူးတေ September 22, 2010 at 7:20 PM
စားချင်စရာလေး... ပူးတေက oyster mushroom ပဲ စားဖူးသေးတယ်... မှိုပုံလေးက ချစ်စရာလေး... ကိုယ်လုံးကြီးကြီး ခေါင်းသေးသေးနဲ့.... သူက king oyster mushroom ဆိုတော့ ပိုကောင်းမှာပေါ့....တီဆွိ မှိုကန်ဇွန်း နှိပ်စက်မှုကြောင့် ဗိုက်တောင်ဆာသွားတယ်... ဂလု ဂလု.... ;P
သက်ဝေ September 22, 2010 at 8:13 PM
တမျိုးပြီး တမျိုး မရိုးရအောင် နှိပ်စက်ကလူပြုသူ တီတီဆွိ...
(တွေ့ရင် လည်ပင်းညှစ်မယ်... ဒါပဲ...)
T T Sweet September 22, 2010 at 8:16 PM
ဘလော့ဂ်ရေးရင်းနဲ့ ကြာရင်တော့ ချောင်းရိုက်ခံရတော့မယ်နဲ့တူတယ်း) ဂလုတွေ အရမ်းများကုန်ပြီ။
မြူးမြူး ... အန်င်္တီဆွိက ဂျူရောင်းမှာနေတာဟုတ်ပါတယ်။ ဂျူရောင်းပွိုင့်ကို ခဏခဏရောက်တယ်။
ဟင်းချက်ဝါသနာပါသူ ဂျူရောင်းသူအချင်းချင်း တွေ့ကြလေပြီ ... ဒန် ..ဒန် ...
ပူးတေ king တစ်လုံးပဲကွာပေမဲ့ ပုံစံရော၊ အရသာရော တခြားစီပဲ။ ၀ယ်ကြော်ကြည့်နော်။
ကိုဇက် ... မှိုချက်ရတာလွယ်ပါတယ်၊ မြန်လဲမြန်တယ်။ ချက်စားကြည့်ပါ။
အမြဲလာဖတ်ပြီး အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါနော်။ နှိပ်စက်သလိုဖြစ်တွားရင် ချောတီး ... ချောတီး ...းဝ)
T T Sweet September 22, 2010 at 8:18 PM
အန်တီသက်ဝေရောက်လာပြီကွ။ သူဒီနေ့ စိတ်ကြီးဦးမလား စောင့်ကြည့်ဦးမယ် ... ဟီဟိ။
ဝက်ဝံလေး September 22, 2010 at 8:22 PM
ဂလု ပလပ် ရှလွတ်
ခုတော့လဲ ကြေဥကြော်နဲ့ ၂ ပါးသွားနေရပါတယ် လူလဲ လုံးတုတ်ဖြစ်တာမဆန်းပါဘူး ဟင့် ဗြဲ
khin oo may September 22, 2010 at 10:44 PM
khin oo may September 22, 2010 at 10:48 PM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း September 23, 2010 at 8:49 AM
လသာည September 23, 2010 at 2:06 PM
လသာည ပြန်ရောက်ပြီ။ ခရီးကရောက်တော့ အိမ်မှာ ဘာမှမရှိဘူး။ မရှိဆို အစထဲက ဘာမှမထားခဲ့တာ..(^^)။ အခု အတော်ပဲ။ အစ်မရဲ့ မှိုကန်စွန်းဟင်း စားရင် လည်လည်လာမယ်။ (ချင်ကာပူ ထိလေး))) လာရင် ကျွေးမှာလား...
အစ်မရဲ့ မှိုကန်စွန်းဟင်း စားရင်း လည်လည်လာမယ်။ (ချင်ကာပူ ထိလေး))) လာရင် ကျွေးမှာလား...
Shinlay September 23, 2010 at 9:29 PM
ကြည်မြန်မာ June 10, 2011 at 4:50 AM
ဘာကြော်ကြော် ကြက်သွန်ဖြူနီဆီသတ်ရတာ အရမ်းမုန်းတယ်..။ ဟင့်..။ တီဆွိဟင်းတွေက အရသာခံ...စားတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အတော်ကိုကောင်းပါတယ်..။ အနော်ကပျင်းတာနဲ့ အရသာမခံဘူးဗျာ..။ ဗိုက်ဝပြီးရော အများကြီးစားလိုက်တာပဲ..။ ဟင့်..။